Naples na-eti mkpu na Miracle nke Padre Pio: "n'ime ime ụlọ ọrụ ahụrụ m otu onye mọnk dị nso" | Blọọgụ nke ekpere
Naples tiri mkpu na ọrụ ebube Padre Pio: "n'ime ụlọ ịwa ahụrụ m, mọnk dị nso"
Paolo Tescione	Edere ya Maggio 23, 2020 Maggio 23, 2020
Akụkọ banyere nwa okorobịa dị afọ iri atọ na atọ aha ya bụ Ciro bi na onye obodo Naples na-akọwa etu Padre Pio si nyere ya aka mgbe a kpọgara nwa okorobịa ahụ n'ụlọ ọgwụ. Site na ebe ahụ, ebe ejirila nyocha niile dị mkpa, a na-aghọrọ ụkwara ahụ mberede maka ụbụrụ.
Saịrọs mara mma, n'agbanyeghị na ọ nọ n'okpuru ọgwụ na-agwọ ọrịa, gbara akaebe na onye mọnk na-eme ya ka ọ na-anọnyere oge niile.
Saịrọs kwuru na onye mọnk ahụ bụ Padre Pio onye ọ kpọrọ oku ma kpee ekpere tupu ọ banye n'ime ụlọ ọrụ ahụ.
Anyị na-ekele Ciro maka akaebe mara mma a.
Kpee ekpere ka ọ rịọ gị arịrịọ
O Jisos, juputara n’amara na oru ebere na onye e mehiere n’ihi mmehie, onye, ​​site n’ịhụnanya maka mkpụrụ obi anyị, chọrọ ịnwụ n’obe, eji m obi umeala na-arịọ gị ka inye otuto, n’elu ụwa a, ohu Chineke, Saint Pius sitere na Pietralcina onye jiri obi oma soro na ahuhu gi, huru gi n'anya nke ukwuu, ma nwee ezi uche maka otuto nke Nna gi na imere nkpuru obi. Ya mere ariọm Gi ka I nyem, ka aririọ-amara-ya gosi mu amara.
3 Otuto diri Nna
← Na post gara aga Gara aga post:Ọnwụ nke Jizọs pụtara n’eluigwe na-ahụ ka puku kwuru puku ndị mmadụ tiri mkpu n’ọrụ ebube ahụ
Ọzọ Post → Post ozo:Na-atụgharị uche taa maka ọnụnọ nke Onyenwe anyị mgbe niile na mmekọrịta chiri anya na ndụ gị